Madaxtooyadda Somalia oo laga eryay Agaasime Waaxeed Shalay ka hadlay Masjidka Madaxtooyadda. – Hornafrik Media Network
Warqad ku socotay Ciidamadda Illaaladda Madaxtooyadda ayaa lagu amray Ciidanka inaysan u oggolaan inuu soo galo Xafiisyadda Madaxtooyo Agaasime C/raxiin Muudeey oo dhawaan ka istaagay Masjidka Madaxtooyo, isagoo ku dhaliilay Madaxda Qaranka inay raali ka noqdeen Cadaalad Daradda ka dhex jirta Xafiisyadooda.
Warqadan ayaa sidoo kale lagu amray Ciidanka inay ka qaadaan Agaasimaha Kaarkiisa Aqoonsiga, iyo Furayaasha Xafiisyadda uu masuulka ka yahay, Waxaana lagu sheegay Qoraalka in gabi ahaanba laga ruqseeyay Shaqadda Madaxtooyo, loona wareejiyay Wasaaradda Shaqadda iyo Shaqaalaha.
Warqadan ayaa waxaa ku saxiixnaa Agaasimaha Madaxtooyo, Fahad Yaasiin, Waxaana Agaasimahan uu qayb ka yahay Agaasime Waaxeedyo iyo Shaqaale laga cayriyay Madaxtooyaddda, iyadoo aan loo marin Sifo Sharci ah.
Isha Warka: XamarPost